लामखुट्टेबाट हैरान हुनुहुन्छ ? यस्ता छन् लामखुट्टे भगाउने घरेलु उपायहरु !
एजेन्सी १७ चैत । अहिले दिनानुदिन गर्मी बढी रहेको छ । गर्मी मौसम बढेसंगै लामखुट्टे पनि बढीरहेका छन् । लामखट्टेको टोकाइबाट विभिन्न प्रकारका सरुवा रोगहरु लाग्ने र फैलिने गर्दछन् ।
लामखुट्टेबाट छुटकारा पाउनका लागि हामीले बजारमा पाइने धुप तथा लिक्विडको प्रयोग गर्ने गर्दछौं । त्यसले लामखुट्टे त भाग्छ नै तर, बजारमा पाइने यस्ता सामानहरुमा विभिन्न किसिमका केमिकल मिसाएको हुन्छ । त्यसैले यो सामान प्रयोग गर्दा लामखट्टे भागे पनि यसले मानव स्वास्थ्यमा पनि नजानिदो तरिकाबाट असर गरिरहेका हुन्छन् ।
त्यसैले गर्मी मौसममा लाग्ने लामखट्टे भगाउनका लागि केही घरेलु उपायको प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसको प्रयोगबाट हाम्रो स्वास्थ्यमा असरपनि गर्दैन र सजिलैसित लामखट्टे पनि भगाउन सकिन्छ । यसरी लामखुट्टे भगाउँदा लामखुट्टेबाट छुटकारा पाउनका साथै स्वास्थ्यमा पनि असर गर्दैन ।
तुलसी- तुलसीको बास्ना लामखुट्टेलाई मन नपर्ने हुनाले तुलसीलाई घरआगनमा रोप्ने । जसले गर्दा लामखुट्टे घरबाट टाढै रहन्छ ।
कागती ल्वाङ- कागतीलाई काटेर त्यसको बिचमा ल्वाङ राख्ने र घरको वरीपरी राख्ने । यसो गर्दा लामखुट्टे भाग्छ ।
लसुन- लसुनको बास्ना लामखुट्टेलाई मन पर्दैन तसर्थ लसुनलाई टुक्रा बनाएर घरको वरीपरी राख्ने । यसका साथै खानामा बढी प्रयोग गर्दा पनि लसुन खाएको मानिसबाट पनि टाढा हुन्छ ।
नीम- नीमको पेस्ट बनाएर छालामा दल्नाले पनि लामखुट्टे शरीरको वरपर आउँदैन ।
कपुर पानी- दुई टुक्रा कपुर एक कप पानीमा हाल्ने र घरवरपर छर्किने गर्नाले पनि लामखुट्टे भाग्दछ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १७, २०७७, १२:५५:००